प्रहरीले लामिछानेलाई सम्पर्क गरिरहेको छ, अब पक्राउ गरिन्छ: प्रहरी प्रमुख मल्ल – PanchKhal Online
Home/समाचार/प्रहरीले लामिछानेलाई सम्पर्क गरिरहेको छ, अब पक्राउ गरिन्छ: प्रहरी प्रमुख मल्ल
प्रहरीले लामिछानेलाई सम्पर्क गरिरहेको छ, अब पक्राउ गरिन्छ: प्रहरी प्रमुख मल्ल
243 Less thanaminute
काठमाडौं । चितवन प्रहरी प्रमुख दानबहादुर मल्लले पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेविरुद्ध कारवाही प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् । पत्रकार पुडासैनीको शव भरतपुरस्थित एक होटलमा गत २० गते फेला परेपछि अनुसन्धान थालेको प्रहरीले सुरुदेखि नै रवि लामिछानेको नाम आएकाले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । बुधबार पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघिको करिब ८ मिनेट लामो भिडियो नै सार्वनजिक भएपछि प्रहरीमाथि तीव्र दबाब परिरहेको अवस्थामा एसपी मल्लले यस्तो बताएका हुन् ।
पत्रकार पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघि खिचेको भिडियो र रेकर्ड गराएको अडियो प्रहरीले नै गायब गरेको आरोप लागिरहेका बेला मल्लले रविसहित तीन जनाविरुद्ध कारवाही थालिएको जानकारी दिएका हुन् । पत्रकार पुडासैनीले भिडियोमा रवि, युवराज कँडेल र ओखलढुंगाकी युवती अस्मिता कार्कीका कारण आफूले आत्महत्या गर्न बाध्य भएको कुरा भिडियोमा बोलेका छन् । एसपी मल्लले असार २१ देखि नै चितवन प्रहरी यही प्रकरणको अनुसन्धानमा जुटेको बताएका छन् । म यही विषयमा लागि रहेको छु । प्रहरीले रवि लामिछानेलाई सम्पर्क गरिरहेको छ, एसपी मल्लले भने, अब पक्राउ गरी कारवाही प्रकृया अघि बढाइन्छ । म त्यो प्रकृयामा लागिसकेको छु ।
एसपी मल्लले पुडासैनीको मोबाइल फोन र उक्त फोनमा रहेका अडियो, भिडियो ल्याबमा परीक्षण भइसकेको पनि जानकारी दिए । उनका अनुसार ल्याव परीक्षणबाट मोबाइलमा भेटिएको भिडियोको आवाज पुडासैनीकै पुष्टि भएको छ । विधि विज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको ल्याव रिपोर्ट पनि आइसकेको छ, मल्लले भने, किटाणी जाहेर आएपछि अब कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्छ । यो खबर हामीले थाहा खबरबाट लिएका हौं ।
२४ लाखले हेरेको भिडियो एकासी कहाँ हरायो ?
चितवनमा झडप, डिएसपीसहित ७ प्रहरी र प्रदर्शनकारी घाइते
दैव पनि कति निष्ठुरी : सबैको मनमा बसेकी निलमको ५० वर्षको उमेरमा निधन
राजदरबार हत्याकाण्डका १८ वर्ष: घटना आखिर कसले गरायो ? यी ६ कुराबाट हत्यारा पत्ता लाग्न सक्छ
संघीयताको मर्म विपरित प्रदेश प्रहरीलाई संघीय प्रहरीको शाखा बनाउन खोजेको सांसदहरुको आरोप